Kardinaly - Wikipedia
Ny kardinaly Walter Kasper (ankavia) et ny kardinaly Godfried Danneels (ankavanana) misatrika barety sy kalôty.
Ny kardinaly dia manam-boninahitra ambony ao amin' ny Fiangonana katôlika izay fidin' ny papa mba hanampy azy amin' ny raharaha fanompoana ataony sy mpanolo-tsaina azy. Avy amin' ny teny frantsay hoe cardinal, izay avy amin' ny teny latina hoe cardinalis, io teny io. Ny filazana feno io andrakitra io dia ny hoe "kardinalin' ny Fiangonana Rômanina Masina" (latina: Sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalis). Ny Fivondron' ny Kardinaly no mamorona ny fahefana tampony manarakaraka ny an' ny papa.
1 Fivoaran' ny fampiasana ny teny hoe kardinaly
2 Ireo karazana kardinaly sy ny isany
3 Ny laharam-piamboniana amin' ny samy kardinaly
4 Sata sy andraikitry ny kardinaly
5 Fitafian' ny kardinaly
6.1 Ireo kardinaly ela velona
Fivoaran' ny fampiasana ny teny hoe kardinaly[hanova | hanova ny fango]
Efa tamin' ny vaimpotoan' ny Empira Rômanina no nampiasana ny teny hoe cardinalis hilazana ireo miaramila manam-boninahitra miankina amin' ny emperora mivantana, na ireo mpitari-tafika (jeneralin-tafika), na ny solontenan' ny emperora tany Azia na taty Afrika, noho izy ireo misahana ireo loha andraikitra eo amin' ny empira.
Taorian' ny kônsily tao Nikea (na Nisea) no nampiharana ny anarana hoe kardinaly amin' ny mpitondra fivavahana miasa amin' ny katedraly, nefa taty aoriana dia tsy nomena afa-tsy ny mpikambana sasany ao amin' ny mpitodra fivavahana katôlika rômanina ihany izany.
Ireo karazana kardinaly sy ny isany[hanova | hanova ny fango]
Tarcisio Bertone, kardinaly-eveka
Niova tsikelikely hanondroana ireo pretra mitantana ireo fiangonana fehezin' ny paroasin' i Rôma io anaram-boninahitra io dia ireo nantsoina hoe "kardinaly-pretra"; ny diakra mitantana maharitra ny asa fiantrana amin' ny faritr' i Rôma dia nantsoina hoe "kardinaly-diakra"; ary ny eveka nisahana ireo diôsezy amin' ny tanàn-dehibe manodidina an' i Rôma (ireo evese mifanefitra faritra amin' ny diôsezin' i Rôma) dia nantsoina hoe "kardinaly-eveka". Hatramin' ny fiafaran' ny Andro Antenatenany dia niantsoana ireo pretra niandraikitra ireo fiangonan-dehibe manana ny maha izy azy toy ny an' i Kônstantinôpla sy ny an' i Napôly ary i Milano io anaram-boininahitra io.
Ny papa no manendry ny kardinaly. Maka hevitra amin' izy ireo matetika ny papa. Miova arakaraka ny vabimpotoana ny isan' ny kardinaly: tamin' ny taona 1586 dia noferan' ny papa Siksto V ho 70 ny isan' izy ireo (ka ny 6 kardinaly-eveka, ny 50 kardinaly-pretra, ary ny 14 kardinaly-diakra); amin' ny ankapobeny anefa dia nisy toerana folo hatramin' ny dimy ambin' ny folo tsy nisy olona nipetraka. Izany isa 70 izany dia mampahatsiahy ny isan' ireo antidahy notenfdren' i Môizy (na Mosesy).
Ny kardinaly-eveka dia mitondra ny anaran' ny diosezin' ny tanàna sahaniny; ny kardinaly-petra izay maro eveka amin' ny diosezy dia mitondra ny anaran' ny fiangonan' i Rôma, ary ny kardinaly-diakra amin' ny ankapobeny dia pretra misahana andraikitra fadraharahana ao Vatikàna.
Hatramin' izay ka hatramin' ny taona 1962 dia tsy maintsy pretra ny kardinaly-diakra, nefa nanomboka tamin' io taona io dia tsy maintsy notokanana ho eveka izy ireo, afa-tsy raha eken' ny papa ny tsy hampiharana. Ny papa Joany Paoly II dia nanaiky fanendrena kardinaly izay pretra tsy notokanina ho eveka, isan' izany ireo mompera Henri de Lubac (zezoita) sy i Yves Congar (dôminikanina) ary kardinaly maro hafa koa izay tsy mpifidy.
Tamin' ny taona 1958 ny papa Joany XXIII dia nanafoana ny lalàna izay nametra ny isan' ny kardinaly ho 70. Ny papa Paoly VI dia nanaraka izany koa, ary tamin' ny faran' ireo taona 1960 dia nofoananany fanakelezana ny isan' ny kardinaly. Noho izany dia tsy nitsaha-nitombo ny isan' ny kardinaly; ohatra amin' izany ny tamin' ny taona 2006 izay nahitana kardinaly miisa 193 ka ny 120 amin' izy ireo mpifidy. Tamin' ny taona 2020 dia nahatratra 229 ny isan' ny kardinaly teo ambany fahefan' ny papa Fransoà.
Ny laharam-piamboniana amin' ny samy kardinaly[hanova | hanova ny fango]
Ao amin'ny fivondronan' ny kardinaly, ny laharam-piambonian' ny kardinaly dia faritan' ny halehiben' ny evese sahaniny sy ny fotoana nanendrena azy ireo ho kardinaly. Ireo izay notokanana taloha kokoa dia mitana toerana ambony kokoa. Ny sojabe ao amin' ny fivondronan' ny kardinaly, izy kardinaly-eveka ,dia fidina ho amin' izany toerana izany araka ny fehezam-pitsipika notapahin' ny papa Paoly VI tamin' ny taona 1965. Ny kardinaly-eveka laharana voalohany dia manana zo hanokana ny papa raha tsy eveka ny papa amin' ny fanendrena azy. Ny kardinaly-diakra laharana voalohany dia diakra voalohany ao amin' ny fivondronan' ny kardinaly ary manana zo hanambara sy nametraka ny papa vaovao ho amin' ny andraikiny. Ny kardinaly mpikarakara efi-trano dia misahana ny fananan' ny Fiketrahana Masina, ary mitantana ny Fiangonana rehefa tsy eo ny papa.
Sata sy andraikitry ny kardinaly[hanova | hanova ny fango]
Ny kardinaly Joseph Aloisius Ratzinger (ilay lasa papa Benoà) sy Franciszek Macharski misatroka kalôty mena, sy ny eveka Wiktor Paweł Skworc misatroka kalôty volomparasy.
Tamin' ny taona 1059, tamin' ny fotoana nisian' ny fanavaozana gregôriana, ny papa Nikôlao II dia namaritra amin' ny fomba marin-tandrify kokoa ny satan' ny kardinaly sady nanome azy ireo laharam-boninahitra ambony kokoa mitaha amin' ny an' ny eveka hafa ao amin' ny Fiangonana katôlika. Tamin' ny taona 1179, ny papa Aleksandra III dia nanao izay hankatoavana tao amin' ny kônsily fahatelo tao Latràna ny fitsipika izay mbola manan-kery ankehitriny, momba ny roa ampahatelo maro anisa andaniana amin' ny fifidianana ny papa vaovao. Tamin' ny taona 1181 ny kardinaly pretran' i Rôma dia nahazo fahefana hifidy ny papa, izay tsy adraisan' ny mpitondra fivavahana sy ny vahoakan' i Rôma anjara. Ny kardinaly, noho izany no manana laharam-boninahitra ambony noho ny eveka.
Ny kardinaly dia mitarika ny Kôngregasiona rômaninan' ny governemantan' ny papa, ka ny fivoriam-beny dia tarihin' ny papa. Ny andraikitry ny kardinaly dia faritan' ny taonany. Sahala amin' ireo mpitondra fivavahana ambony dia tsy miala amin' ny andraikitra ara-pandraharahana izy ireo rehefa feno 75 taona, ary tsy afaka mandray anjara amin' ny fifidianana papa intsony izy ireo rehefa feno 80 taona.
Ireo famerana ny andraikitry ny kardinaly ireo dia napetraky ny papa Paoly VI tamin' ny taona 1970. Amin' ny maha mpifidy papa ny kardinaly dia izy ireo no mampakatra ny iray amin' izy ireo ho eo amin' izany toeran' ny papa izany.
Ny kardinaly notendrena hiandraikitra ny kôngregasiona na ny fitsarana na ny birao momba ny raharaham-piangonana dia mahazo fidiram-bola alaina amin' ny tahirin-karenan' ny papa. Ny kardinaly dia matetika miasa amin' ny maha solontenan' ny papa azy amin' ireo asa famitana iraka saro-pady.
Fitafian' ny kardinaly[hanova | hanova ny fango]
Ny kardinaly Christoph Schönborn misatroka barety mena
Mitafy ankanjo lava miloko mena antitra manopy volomparasy izy ireo ary manao satroka miendrika bola tapaka, atao hoe kalôty () miloko mena na satroka efa-dafy, atao hoe barety (italiana: berretta; frantsay: barette), izay ampisatrohin' ny ny papa azy ireo amin' ny andro anendrena azy ireo. Izany oko mena izany dia lokon' ny fitafian' ny Senatera tamin' ny andron' ny Empira Rômanina sady mampahatsiahy koa ny ra latsaka avy amin' i Kristy. Ny papa Inôkentio IV tamin' ny kônsily voalohany tao Lyon tamin' ny taona 1245 no nanome ny loko mena antitra manopy volomparasy sy ny satroka mena ny kardinaly.
Ny fitondrana satroka lehibe mena misy bolan-kofehy maro manaingo azy amin' ny kônsily dia nofoanan' ny papa Paoly VI tamin' ny taona 1969.
Mandritra ny fotoan' ny Fiaviana (na Advento) sy ny Karemy na amin' ny fotoana tsy mampisy papa dia manao fitafiana miloko volomparasy ny kardinaly, mitovitovy amin' ny an' ny eveka, ho mariky ny fivalozana na ny fisaonana.
Samihafa[hanova | hanova ny fango]
Ireo kardinaly ela velona[hanova | hanova ny fango]
Ny kardinaly Jorge da Costa (Pôrtogey) dia tsy maty raha tsy tamin' ny faha-102 taonany (1406-1508). I Corrado Bafile (Italiana) koa dia tsy maty raha tsy tamin' ny faha-101 taonany sy 214 andro (1903-2005). Tsy maty ny kardinaly Loris Francesco Capovilla (Italiana) raha tsy efa feno 00 taona sy 225 andro (1915-2016). Ny kardinaly José de Jesús Pimiento Rodriguez (Kôlômbiana) dia tsy maty raha tsy efa feno 100 taona sy 197 andro (1919-2019).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kardinaly&oldid=1001903"
Voaova farany tamin'ny 3 Martsa 2021 amin'ny 10:56 ity pejy ity.